ဗစ်မင်လ္လာဟ် ဟမ်ဒ်စူရာဟ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသလား အကျယ် တဝန်း သိချင်ပါတယ်?အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
သံသယဖြစ်ဖွယ် မေးခွန်း နှင့် အဖြေ
ဗစ်မင်လ္လာဟ် ဟမ်ဒ်စူရာဟ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသလား အကျယ် တဝန်း သိချင်ပါတယ်?
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၇ - ၈:၀၅ ညနေ News Code : 868488 Source : ABNA Link:
ဗစ်မင်လ္လာဟ် ဟမ်ဒ်စူရာဟ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသလား နှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သိစေရန် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မိုရှီးရာဇီး ၏ (( شیعه پاسخ می گوید )) ကျမ်း မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဗစ်မင်လ္လာဟ် ဟမ်ဒ်စူရာဟ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသလား ?
ဗစ်မင်လ္လာဟ် ဟမ်ဒ်စူရာဟ် ၏ အစိတ်အပိုင်း
ရှီအာအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)များအနေဖြင့်ကအ်ဗာကျောင်းတော်သို့ဟဂ်ျပြုဖို့သွားရောက်သည့်အခါအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏သွန်သင်ချက်အရစဝါဗ်ရရန်အလို့ငှာမက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ၌စည်းလုံးရေးကိုဦးထိပ်ထားပြီးစွန်နီ နမာဇ်ဇေဂျမာအတ်၌ ဝင်ရောက်ဖတ်ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင်ရှီအာများကိုအံ့အားသင့်စေသောအရာသည်ရှေ့ဆောင် ဆရာသည် လုံးဝ၊ بسم الله الرحمن الرحيم ကိုစူရာဟ်ဟမ်ဒ်အစ၌မဖတ် ချေ။(သို့)တိုးတိုးလေး(သို့)ဖုန်းကွယ်ပြီး၊ဖတ်လေ၏။ရုတ်စွအဆုံးအသံထုတ်ဖတ်ရမည် နမာဇ်(ဥပမာ)မဂရစ်၊အေရှာ၊ဖဂျရ်၌ပင်အသံမထုတ်ချေ။
بسم الله الرحمن الرحيم သည်ပထမဦးဆုံးအာယတ်အဖြစ်ဖေါ်ပြထားပေး သည်။
၁။အေမာမ်ရှာဖေအီးနှင့်၎င်းနောက်လိုက်များသည်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစဖြစ်ပြီး၊နမာဇ်၌ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။အကယ်၍နမာဇ်ကိုဇဟိုရ် နှင့်အစဲရ် ဖြစ်ပါက တိုးတိုးဖတ်ရမည်။ နမာဇ်(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)၌ အသံကိုထုတ်၍ ဖတ်ရမည်ဟုခံယူထားပေသည်။
၂။အေမာမ်ဟန်ဗဲလ်နှင့်၎င်းနောက်လိုက်များအနေဖြင့်နမာဇ်၌ ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်ဖတ်ရန်ဝါဂျစ်(ပ)ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်တိုးတိုးဖတ်ရပေ မည်ဟုခံယူထားပေသည်။
၃။အေမာမ်မာလစ်၊အေမာမ်အဘူဟနီဖာနှင့်၎င်းတို့၏နောက်လိုက်များအ နေဖြင့် ဗစ်မေလ်လ္လာဟ် ကိုနမာဇ်၌လုံးဝမဖတ်ကြဟုခံယူထားပေသည်။
أكثر مشروعة فى أوّل الفاتحة و أوّل كلّ سورة فى قول الرحيم إنّ قراءة بسم الله الرحمن أهل العلم و قال مالك و الأوزاعى لا يقرؤها فى أوّل الفاتحة
و يروى ... غير مسنون و لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ الجهر بها...
… بن جبير الجهر بها و هو مذهب الشافعى مجاهد و سعيد عن عطاء و طاووس و
အများစုပညာရှင်များအမြင်၌ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်အားစူရာဟမ်ဒ်နှင့်အ ခြားစူရာဟ်များ၏အစ၌ဖတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊မာလစ်ခ်နှင့်အောင်ဇအီး(အခြားစွန် နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်များ)နှင့်စူရာဟမ်ဒ်အရင်းအမြစ်မဖတ်ဖို့….အဟ်မာဒ်ဗင်အန်ဘဲလ်ထံမှဆင့်ပြန်သောရီဝါယတ်အရအသံထုတ်၍ဗစ်မေလ်လ္လာဟ် ဖတ်လျှင်မွတ်စ်သဟတ်မဖြစ်ကြောင်း(စဝါပ်မရကြောင်း)ပါရှိပေသည်။အ သာ၊သွာအူးစ်၊မိုဂျဟစ်၊စဟီးဒ်ဗင်ဂျာဘီးရ်တို့၏ဆင့်ပြန်ထားသောရီဝါယတ်များမှလည်းအသံထုတ်၍ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်ကိုဖတ်ရပေသည်။အေမာမ်ရှာဖီ၏အမြင်သည်လည်းဤအတိုင်းဖြစ်ပေသည်။
... بآية من الفاتحة و لا غيرها إلاّ من سورة النمل قال المالكيّة و الحنفيّة ليست البسملة … بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة فى كلّ ركعة سرّاً إلاّ أنّ الحنفيّة قالوا يقرء المنفرد من الفاتحة يجب قرائتها فى الصلوة إلاّ أنّ الحنابلة و قال الشافعيّة و الحنابلة البسملة آية سرّاً و لا يجهر بها و قال الشافعيّة: يسرّ بها فى الصلاة السريّة قالوا كالحنفيّة يقرؤ بها الصلاة الجهريّة و يجهر بها فى
အေမာမ်မာလစ်ခ်၊အဘူဟနီးဖာတို့၏နောက်လိုက်များသည်ဗစ် မေလ်လ္လာဟ်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း၊စူရာဟ် နမ်မလ်၌ပါသော(ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်)သာလျှင်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။အဘူဟနီးဖာ၏နောက်လိုက်များသည်နမာဇ်တစ်ယောက်ထဲဖတ်နေချိန်၌ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်ကိုတိုးတိုးဖတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊သို့သော်ရှာဖေအီးများအနေဖြင့် ဟန်ဘဲလ်လီ များအနေဖြင့်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်သည်စူရာဟ်ဖွာ သေဟာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ နမာဇ်တိုင်း၌ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။
ကွာခြားသည်ဟန်ဘဲလ်လီများအနေဖြင့်ရှာဖေအီးများကဲ့သို့အသံထုတ်ဖတ်ခွင့်မရှိကြောင်း၊တိုးတိုးဖြေးညှင်းစွာဖတ်ရမည်ဟုဆိုထား၏။သို့သော် ရှာဖေအီးများ အနေဖြင့် နမာဇ်အေီးခ်ဖာသီး(နမာဇ်၊ဇဟိုရ်၊အစဲရ်)ကို တိုးတိုး၊ နမာဇ်ဂျဟ်ရီး(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)ကိုအသံထုတ်ဖတ်ရမည်ဟုဆိုထား၏။
ဧကန်မုချသုတေသီတစ်ဦးအတွက်အံ့အားသင့်ရပေသည်။တမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်(၂၃)နှစ်တိုင်တိုင်နမာဇ်များကိုဂျမအတ်ဦးဆောင် ဝတ်ပြုပေးခဲ့သည်။သာဝကများအနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အသံတော်ကိုနားသောတဆင်ခဲ့ကြပေ၏။သို့သော်ဝဖာသ်ဖြစ်ပြီးအချိန်မကြာခင်ကာလ၌ပင်တစ်ချို့ကဗစ်မေလ္လာဟ်ဖတ်ဖို့တားမြစ်ထားကြောင်း၊တစ်ချို့က ဖတ်ဖို့ဝါဂျစ်(ပ)၊ တစ်ချို့ကတိုးတိုး၊တစ်ချို့ကနမာဇ်ဂျဟ်ရီး၌အသံကျယ်!
စဟီဘုခါရီ၌ဤလျို့ဝှက်ချက်ကိုအရိပ်အယောင်ပြနေသောဟဒီးစ် တော်ပါရှိပေသည်။မိုသာရေဖ်အနေဖြင့်အိုမရ်ဗင်ဟဇီး(န)ထံမှတင်ပြသည် မှာ-ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည်ဗစာရေမြို့၌နမာဇ်ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုပေး စဉ်အိုမရ်ဗင်ဟဇီး(န)မှပြောကြားသည်မှာ-
(الله عليه وآله صلى) رسول الله نصلّيها مع صلاةً كنّا هذا الرجل ذكّرنا
အေမာမ်ရှာဖေအီးအနေဖြင့်လည်းမိမိကျမ်း“ الامّ ” ၌ဝါဟပ်ဗင်ကီး ဆန်မှတဆင့်တင်ပြသည်မှာ-
الصلاة قد غيّرت حتى (الله عليه وآله صلى ) كلّ سنن رسول الله
ဟဒီးစ်တော်၁။ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ဆီမှဟဒီးစ်တော်(၁)ပိုဒ်ကိုတင်ပြ ပါမည်။ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏မြင့်မြတ်မှုကိုမွတ်စလင်တိုင်းသိပေသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အတူခရီး၌ဖြစ်စေ၊အိမ်၌ဖြစ်စေ တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ) ဘေး၌ဘယ်သူရှိရှိ၊မရှိရှိအချိန်အခါတိုင်းအတူရှိတော်မူသော သာဝကကြီးဖြစ်ပေသည်။
جميعاً فى السورتين الرحمن الرحيم يجهر ببسم الله (صلى الله عليه وآله) كان النبى
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံ ထုတ်၍စူရာဟ်နှစ်ခု(စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားစူရာဟ်)အားဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့
ဟဒီးစ်တော်၂။အနက်ဗင်မာလက်ခ်(တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အထူးအိမ်အစေခံ)မိမိ၏လူငယ်ဘဝကို တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားပြုစုမှု၌အသုံးပြု ခဲ့သည်။သာဓကဖြစ်ပေသည်။ဟာကင်မ်အနေဖြင့်မွတ်စသဒါရတ်(က) ကျမ်း၌၎င်းသာဝက၏ဟဒီးစ်တော်ကိုတင်ပြသည်မှာ-
خلف عثمان و خلف أبى بكر و خلف عمر و و (صلى الله عليه وآله) صلّيت خلف النبى
الرحمن الرحيم بسم الله بقرائة كانوا يجهرون خلف على كلّهم
ဟဒီးစ်တော်၃။ဒါရွလ်ကိုသ်နီအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာသည်(နေ့၊ ညတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အနား၌ရှိနေသောကြင်ရာတော်)ထံမှ ဟဒီးစ်တော်ကိုရေးသားထားသည်မှာ-
الرحمن الرحيم ببسم الله كان يجهر (صلى الله عليه وآله) إن رسول الله
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံ ထုတ်၍ ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့သည်။
فى الصلوة الرحمن الرحيم ببسم الله (صلى الله عليه وآله) كان رسول الله
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်နမာဇ်၌ بسم الله الرحمن الرحيم အားအ သံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့သည်။
၁။ الكبرى السنن ၂။ مستدرك حاكم ၃။ سنن دارقطنى ၌ပါရှိပေသည်။
ဟဒီးစ်တော်၅။ဟဒီးစ်တော်တစ်ပါး၌ဂျနပေဂျီးဘရေအီးလ်(အ.စ)သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားနမာဇ်ဖတ်ရာ၌ بسم الله ကိုအသံထုတ်၍ဖတ် ရွတ်ခဲ့လေသည်ဟုပါရှိ၏။
နိုအ်မန်းဗင်ဘရှီးမှဆင့်ပြန်ချက်ဒါရွလ်ကိုသ်နီအနေဖြင့်ရေးသား ထားသည်မှာ- တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူသည်မှာ-
الرحمن الرحيم ببسم الله فجهر عند الكعبة اَمّنى جبرئيل
ဂျီးဘရေအီးလ်(အ.စ)သည်ကအ်ဗာကျောင်းတော်အနီး၌ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် بسم الله الرحمن الرحيم ကိုအသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ်ခဲ့လေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်က بسم الله الرحمن الرحيم ကိုအ သံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ရမည်ဟုပါရှိသောဟဒီးစ်တော်များကိုစွန်နီအကျော်အ မော်ပညာရှင်များကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊၎င်းတို့အနက်အချို့ပညာရှင်များသည်သာဓကအားဖြင့်ဟာကင်မ်သည်မိမိ၏ကျမ်း مستدرك ၌ဟဒီးစ်တော် များ၏အောက်တွင်ဤဟဒီးစ်တော်များခိုင်လုံမှန်ကန်ပါသည်ဟုရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာ၌ဆက်လက်၍တင်ပြရန်အရေးကြီးသောအချက်သည် ကား-အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏ဟဒီးစ်တော်များကိုရေးသားထားသော၊ အကိုးအကား ကျမ်းများအားလုံး၌ بسم الله الرحمن الرحيم အားစူရာဟ်ဟမ်ဒ် ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ခံယူထားပြီး၊ بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ရ မည်ဆိုထားသောဟဒီးစ်တော်အားလုံးသည်“မိုသာဝါသေ”(စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်မှန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်တော်ထံရောက်ရှိလာသောစစ်မှန်သော ဟဒီးစ်တော်) များဖြစ်ပေသည်။
ပိုမို၍အကျယ်တဝင့်လေ့လာနိုင်ရန်၊ဝဆာအေလေရှီအာကျမ်း ابواب قرائت ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အခန်း(၁၁/၁၂/၂၁/၂၂)၌လေ့လာနိုင်ပေသည်။ အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)မှတဆင့်ပါရှိသောမြောက်များစွာသောဟဒီးစ်တော် များကို“ကာဖီ”ကျမ်း၊“အခ်ဗာရွလ်ရေဇ်(အ.စ)”ကျမ်း“မွတ်စ်သဒါရက်ခ်ကိုလ်ဝဆာအေ” ကျမ်း ابواب قرائت ခေါင်းစဉ်အောက်၌လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရှီအာ၊စွန်နီကျမ်း၌ပါရှိသောဟဒီးစ်စေစကလိုင်းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူထားသောကုရ်အာန်နှင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)အားလက်ကိုင်ထားပြီးလမ်းလွဲ၊လမ်းမှားမှလွတ်မြောက်မှုရရန်မကြိုးစားသင့်ပါသလော?ဤကဲ့သို့အယူအဆလွဲသော၊ပြဿနာကိစ္စရပ်များတွင် အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏မဇ်ဟပ်ဘက်သို့ဦးညွှန်ပြီး၎င်းတို့၏အမိန့်ဩဝါဒ များအပေါ်၊မကျင့်သုံးသင့်ပါသလော?
بسم الله الرحمن الرحيم အားစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မသတ်မှတ်ဘဲ၊ အသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ် ခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားသောရီဝါယတ်များဖြစ်ပါသည်။အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟဒီးစ်တော်၁။စဟီးမွတ်စလင်၌ قتاده မှတဆင့်ရီဝါယတ်တော်အားရေးသား ထားသည်မှာ-
(صلى الله عليه وآله) صليت مع رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم يقرء منهم فلم أسمع احداً و ابى بكر و عمر و عثمان
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ရစူလေခိုဒါ၊အဘူဘာကဲရ်၊အိုမာရ်၊အွတ်စ်မန်းတို့၏ နောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၊၎င်းတို့အနေဖြင့် بسم الله ဖတ်ရွတ်သံကို တစ်ခါမျှမကြားဘူးချေ။
အံ့အားသင့်စရာအချက်သည်ကား-အနက်စ်အနေဖြင့် بسم الله အား အသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့သည်ဆိုသောဟဒီးစ်တော်၌တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည်ခလီဖွာ(၃)ဦးနှင့်မောင်လာအလီ(အ.စ)တို့၏နောက်၌နမာဇ်ဝတ် ပြုခဲ့ ရာ بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့သည်ဆိုပြီး၊ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် အခြားဟဒီးစ်တော်၌တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်ခလီဖွာ(၃)ဦးနောက်၌ နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၎င်းတို့သည် بسم الله အားအသံထုတ်၍မဖတ်ရွတ်ခဲ့ ကြောင်းဆိုထားလေ၏။
ပထမဟဒီးစ်(အသံထုတ်၍ بسم الله ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်း)ကိုပယ် ဖျက်ရန်ဒုတိယဟဒီးစ်အားလုပ်ကြံရေးသားထားပေသည်။(ရှေ့၌ဖေါ်ပြပါ မည်။)ပြီးနောက်အနက်စ်ဟုအမည်တပ်ပေးထားသည်။ဤအတွက်ကြောင့်အသံထုတ်မဖတ်ရဆိုသောဒုတိယဟဒီးစ်၌ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏အမည်ကိုမထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။အကယ်၍ထည့်လိုက်ပါကဟဇ ရတ်(သ)အလီ (အ.စ) သည်အသံထုတ်၍ بسم الله ဖတ်ရွတ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ နေရာတိုင်း၌ မောင်လာအလီ(အ.စ)အားအချစ်ထားသူများရှိနေသဖြင့်သိက္ခာကျခံရခြင်း၊အဖြစ်ရောက်အောင်ရှောင်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဟဒီးစ်တော်၂။အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်မဂ်ဖေလ်ထံမှဆင့်ပြန်ချက်ကိုစိုနန်ဘိုင်ဟကီး၌ပြောပြထားသည်မှာ-
فقال: أى بنىّ محدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم سمعنى ابى و أنا أقرء
عثمان فلم و ابى بكر و عمر و (صلى الله عليه وآله) صلّيت خلف رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم أسمع أحداً منهم جهر
ကျွန်တော်နမာဇ်၌အသံထုတ်၍ بسم الله ဖတ်ရွတ်ခဲ့ရာကျွန်တော်အ ဖေကြားသွားသည့်အခါပြောလေ၏။ပေဒ်အတ်လုပ်နေရသလား? ငါအနေ ဖြင့် ရစူလ်ခိုဒါ(ဆွ)၊အဘူဘာကဲရ်၊အိုမာရ်၊အွတ်စ်မန်းတို့၏နောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၊ بسم الله ဖတ်ရွတ်သံကိုတစ်ခါမျှ မကြားဘူးချေ။
المشركون هزء منه إذا قرء بسم الله الرحمن الرحيم ( كان رسول الله(صلى الله عليه وآله
هذه فلما نزلت «الرحمن» و كان مسيلمة يسمى قالوا محمد يذكر إله اليمامة ـ و
لا يجهر بها؟ الآية امر رسول الله(صلى الله عليه وآله) ان
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ် ချိန်၌မိုရှာရေက်များအနေဖြင့်ပြောင်လှောင်ခဲ့ကြသည်။အကြောင်းသည် ကား- يمامه၌ مسيلمه အမည်မှာ «رحمان» ဖြစ်ပေ၏။၎င်းတို့အနေဖြင့်ပြော ကြသည်မှာ- မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ပြောသော رحمانသည် يمامه ကအလ္လာဟ်ဖြစ် သည်ဆိုကြသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ရန် بسم الله အားအသံ ဖထုတ်၍မဖတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့လေ၏။
ပထမအချက်-«رحمن»စကားလုံးသည် بسم الله الرحمن الرحيم ၌သာတွင်ပါဝင်သည်မဟုတ်ချေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အတွင်း(၅၆)ကြိမ် ပါဝင်ပေသည်။စူရာဟ်မရ်ရမ်(အ.စ)အတွင်း၌ပင်(၁၉)ကြိမ်ပါရှိပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍စူရာဟ်များကိုလည်းမဖတ်ရွတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဖတ်ရွတ်ပါကမိုရှာရေက် များသည်ပြောင်လှောင်ကြမည်ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယအချက်-မက္ကာမြို့ရှိမိုရှာရေက်များသည် بسم الله الرحمن الرحيم အား ပြောင်လှောင်သရော်ခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်ပေ၊ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံးကိုသည်။ ပြောင်လှောင်သရော်ခဲ့ကြပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၌ နေရာအမြောက်အများပါရှိပေသည်။သာဓကအားဖြင့်စူရာဟ် နေအာယတ်တော်၁၄၀တွင်ပါရှိသည်မှာ-
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ
ထိုနည်းတူစွာ၎င်း မိုရှာရေက်များသည်အာဇန်ကိုပင်ပြောင်လှောင် သရော်ခဲ့ကြကြောင်းစူရာဟ်မာအေသအာယတ်တော်၅၈၌ဖေါ်ပြထားသည်။
نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَإِذَا
ဤကဲ့သို့ပြောင်လှောင်သရော်ခြင်းခံရပြီးနောက်တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)သည်အာဇန်မပေးဖို့၊အာဇန်အားတိုးတိုးပေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါသ လား?
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً وَإِذَا رَآكَ
သို့ဖြစ်ပါ၍ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) သည်အပြင်မထွက်ဖို့လုံးဝ သင့်ပေ၏။အားလုံးကိုခဏထားပါလေ။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်မိုရှာရေက်များ၏ပြောင်လှောင်သရော်မှုမှကာကွယ်ပေးမည်ဟုကတိ ပေးထားပေသည်။
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِين
တတိယအချက်။ ။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်«رحمن»ဆိုသည်စကား ကိုဝှက်ဖို့(သို့)တိုးတိုးဖတ်ဖို့အမိန့်ပေးရသည့်အထိဖြစ်လောက်အောင် مسيلمه ဆိုသည်မှာဘယ်သူနည်း?၎င်းအပြင် مسيلمه ဖိတ်ခေါ်မှု သည်ဟီဂျရီ ၁၀ခုနှစ်မှဖြစ်လာပြီး ထိုအချိန်၌ အစ္စလာမ်သာသနာသည်အား အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပေသည်။
အထက်ပါအချက်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်ပြီး၊ဟဒီးစ်လုပ်ကြံထားသူများသည်အချိန်အခါနှင့်နေရာကိုထည့်မ တွက်မိသူများ ဖြစ်ကြပေသည်။
ဟဒီးစ်၎။ အဘီရှိန်းဘေသည်မိမိစာအုပ်မွတ်စနပ်ဖ်၌ရေးသားထားပြီးအဗ် နေအဘာစ်ပြောကြားသည်မှာ-
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قرائة الأعراب
بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည်အာရပ်တောသားများ ဓလေ့စရိုက်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
အခြားဟဒီးစ်တော်၌အလီဗင်ဇိုက်ဗင်ဂျန်အန်ပြောကြားသည်မှာ-အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အဘာစ်၊ အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အိုမာရ်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ဇိုက်တို့ (၃)ဦးလုံးبسم الله الرحمن الرحيم အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြပေသည်။
၎င်းအပြင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည်بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်၏ဓလေ့အကျင့်ဖြစ် ကြောင်းကျော်ကြားသောစွန်နီ၊ရှီအာစာအုပ်များ၌ပါရှိပေသည်။ဤအချက်ကိုကြည့်ပြီးဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားတောသားဟုဆိုနိုင်ပါသလား? မောင်လာအလီ(အ.စ)သည်တောသားမဟုတ်ကြောင်းသမိုင်းလေ့လာသူတိုင်းသိနိုင်ပေသည်။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ) ဤကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟဒီးစ်တော်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နောက်ကွယ်၌ထိုခေတ်ကာလကအာဏာရှင်များနိုင်ငံရေးမကစားထားပါသလော?
မှတ်ချက်။ ။ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ဓလေ့စရိုက်သည်အလ္လာဟ် ရစူလ်(ဆွ)၏အမိန့်နှင့်အညီဖြစ်ပေသည်။မိမိစိတ်ကြိုက်မပြုချေ။အကြောင်းသည်ကားဟီဂျရီ(၁)ခုနှစ်တွင်အလ္လာဟ်အရှင်တော်သည်ဟဇရတ်သ်အလီ(အ.စ)၏စိတ်အားဝယ်ယူပြီးဖြစ်ပေသည်။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
မှန်ကြပေသည်။အမှန်တရားသည်ကား- ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) သည်အသံထုတ်၍ بسم الله ဖတ်ရွတ်လေ့ရှိပေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့်မအ် ဝေယာ(လ.န)သည်မောင်လာအလီ(အ.စ)ရှဟာဒသ်ဖြစ်ပြီးနောက်နှင့်အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသမာ(အ.စ)၏တိုတောင်းလှသောအုပ်ချုပ်ရေးကာလပြီး နောက်နန်း(မတရား)တက်ပြီးဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏စွန္နတ်တော်မှန်သမျှကိုဖျောက်ဖျက်ရန်အဓိဌာန်ကာကမ္ဘာအစ္စလာမ်နေရာများမှပျောက် ပျက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပေသည်။
အကြောင်းသည်ကားဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည်မွတ်စလင် များ၏နှလုံးသားကိုအောင်နိုင်ပြီးဖြစ်၍မအ်ဝေယာအနေဖြင့်၏အာဏာ အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းသိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပေ သည်။
ဤအကြောင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ဟာကင်မ်အနေဖြင့်စိတ်ချရသော မွတ်စ်သရက်၌အနက်စ်ဗင်မာလစ်ခ်၏ဟဒီးစ်တော်ကိုရေးသားထားပေ သည်။မအ်ဝေယာသည်မဒီနာမြို့သို့ရောက်လာပြီးနမာဇ်ဂျဟ်ရီ(အသံထွက်၍ ဖတ်ရသောနမာဇ်(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)ကို بسم الله الرحمن الرحيم အား ပထမစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၌ဖတ်ပြီးနောက်အခြားစူရာဟ်များတွင်မဖတ်ချေ။နမာဇ် ပြီးနောက်မိုဟဂျေနှင့်အန်ဆာမှအုပ်စုတစ်စု(အသက်အန္တရာယ်ကြောင့် နမာဇ်လာဖတ်သူများဖြစ်နိုင်ပေသည်)သည်အရပ်မျက်နှာအဖက်ဖက်မှဆူပူကြပြီးပြောကြားသည်မှာ-
الصلاة أم نسيت؟ أسرقت
နမာဇ်ကိုခိုးဖတ်တာလား?မေ့သွားတာလား? ဤအော်သံများကို ကြားပြီးနောက် မအ်ဝေယာသည်နောက်နမာဇ်အားဖတ်ရာ၌ بسم الله အား စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားစူရာဟ်များ၌ထည့်ဖတ်လေ၏။
တစ်နည်းဆိုရလျှင်မအ်ဝေယာအနေဖြင့်မိုဟဂျေနှင့်အန်ဆာကိုစမ်းသပ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ بسم الله ကိုဖြုတ်လျှင်၎င်းတို့လက်ခံ၊မခံ သိလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်မအ်ဝေယာ(လ.န)အနေဖြင့်ဤ လုပ်ရပ်ကိုရှမ်(ဆီးရီးယားနိုင်ငံ)၌အဆက်မဖြတ်လုပ်လေသည်။
သို့ဖြစ်ပေရာအချို့သူများသည် بسم الله စူရာဟ်များတစ်ခု၊နှင့်တစ်ခု ကွဲပေးရန် အတွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားကြလေသည်။
ပထမ။ ။စူရာဟ်များကွဲပေးရန်အတွက်ဟုဆိုလျှင်မမှန်ပေ။အကြောင်း သည်ကားလက်ရှိကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံး၌ بسم الله ကိုပါအာယတ်နံပါတ်အ ဖြစ်တပ်ထားပြီးစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယစူရာဟ်၉ဗရာသ်အားအဘယ်ကြောင့် بسم الله ဖြင့်မခြားထားပါသ လော?အကယ်၍ بسم الله စူရာဟ်ဗရာသ်၌မထားခြင်းသည်ရှေ့စူရာဟ်အန် ဖာလ်ဆက်နွယ်မှုရှိအောင်ဟုဆိုလိုမည်ဆိုလျှင်စူရာဟ်အန်ဖာလ်၏နောက်ဆုံးအာယတ်တော်၌ စူရာဟ်ဗရာသ်၏ပထမအာယတ်တော်အကြားအ ကြောင်းအရာခြင်းမတူနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်အတွင်းနှင့်စူရာဟ်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နွယ်နေသော လည်းကြားမှ بسم الله က ခြားထားကြောင်းတွေ့ရပေသည်။
အမှန်တရားကိုပြောရမည်ဆိုလျှင် بسم الله သည်စူရာဟ်တိုင်း၏အ စိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ဤအတွက်ကြောင့်လည်းလက်ရှိကုရ်အာန်၌ဤကဲ့သို့ဖေါ်ပြထားပါသည်။
စူရာဟ်ဗရာသ်(သောင်ဗာ)သည် بسم الله မထည့်ထားခြင်း၏အ ကြောင်းအရာသည်ကား-ဤစူရာဟ်၌ကတိပေးပြီး၊ဖျက်သောကာဖရ်များ အားမုန်းတီး ကြောင်းကြေငြာထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍အပြစ်ဒဏ်နှင့် رحمان و رحيم သည်မအပ်စပ်သောကြောင့် بسم الله မထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။( رحمانသည်အများအတွက်ဖြစ်ပြီး၊رحيم သည် အထူးသီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်ပေသည်။)
၁။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားစူရာဟ်များ၏အစ၌ بسم الله ကိုဖတ်ရွတ်ခဲ့ပေသည်။(တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အနီးစပ်ဆုံး သာဝကတော်များသည်ဟဒီးစ်တော်များကိုဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်။)အချို့ဟဒီးစ်တော်များအရတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله အားအသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပေသည်။
၂။ بسم الله အားကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဟုဆိုထား သောရီဝါယတ်တော်များပါရှိပြီး၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله အားတိုးတိုးလေးဖတ်ခဲ့ကြောင်းပြဆိုနေသောဟဒီးစ်များ၌လုပ်ကြံထား သောဟဒီးစ်အတုများဖြစ်ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပါဝင်နေပေသည်။ဤအ လုပ်ကိုဘနီအိုမိုင်ယာအနေဖြင့်တိတ်တဆိတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အထောက်အထားသည်ကား-လူထုအကြားဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) သည် بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းကျော်ကြားရာ၊ပြီးနောက် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှသင်ကြားထားသောဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) ၏စွန္နတ်တော်များကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပေသည်။
မအ်ဝေယာ၏လုပ်ရပ်အားမြောက်များစွာသောသာဓကများအနေ ဖြင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊စောဒကတက်ခဲ့ခြင်းနှင့်အခြားအထောက်အထားသဲလွန်စများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်(မအ်ဝေယာနှင့်ဘနီအိုမိုင်ယာ)တို့၏လုပ်ရပ် သည်ဘာလဲဆိုသည်မှာထင်ရှားနေပါသည်။
၃။အေမာမ်(အ.စ)များအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏နောက်လိုက် ကြပြီး၊အေမာမ်တိုင်းသည်بسم الله အားအသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ်ခဲ့ပါသည်။
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى الجَهْرِ بِبِسْمِ الله ( اِجْتَمَعَ آلُ مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله
အာလေမိုဟမ္မဒ်ကိုအားလုံး၏အမြင်သည်ကား- بسم الله အားအသံ ထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းကိုအသံကျယ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။
إلى بنى أميّة الدولة الجهر بالتسمية فلمّا وصلت إنّ علياً(عليه السلام) كان يبالغ فى
( السلام إبطال آثار على(عليه بالغوا فى المنع من الجهر سعياً فى
ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့် بسم الله အားအသံထုတ်၍ ဖတ်လေ့ရှိ၏။ဘနီအိုမိုင်ယာအာဏာရလာသောအခါဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏စွန္နတ် တော်များကိုအစပျောက်စေရန်အလို့ငှာ بسم الله ကိုအသံ ထုတ်မဖတ်ဖို့တား မြစ်ခဲ့ပေသည်။
အဟ်လေစွန္နတ်၏ကျော်ကြားသောပညာရှင်ဖခ်ရေရာဇီး၏ဝန်ခံ ချက်ဖြင့် بسم اللهကိုအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ရန်၊အသံမထုတ်ဖို့ဆိုရာ၌ထို ခေတ်ကအာဏာရှင်၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ထင်၊ရှားရှား၊ကောင်း ကောင်း၊မွန်မွန်၊ကွက်ကွက်၊ကွင်းကွင်းမြင်တွေ့ရပေသည်။
ဤစာအုပ်၏အခြားနေရာ၌ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်ပညာရှင်ဘိုင်ဟကီးဆီမှတင်ပြထားသည်မှာ-အိုမာရ်ဗင်ခါသွာပ်၊အဗ်နေအဘာစ်၊အဗ် ဒွလ္လာဟ်ဗင်အိုမာရ်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ဇိုဗိုင်းရ်အားသောသာဝကများအနေဖြင့် بسم الله အားအသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
فى دينه و من اقتدى فقد ثبت بالتواتر ابى طالب كان يجهر بالتسمية أمّا أنّ على بن
(الله عليه وآله صلى ) و الدليل عليه قول رسول الله بعلى بن ابى طالب فقد اهتدى،
اللّهم أدر الحقّ مع على حيث دار
“သို့သော်ဟဇရတ်(သ)အလီအဘီသွာလစ်(ပ)(အ.စ)သည် بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ခဲ့ကြောင်း“စဝါသိုရ်”ဟဒီးစ်စစ်မှန်ကြောင်း၊စစ်မှန် သောရဝီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အထိရောက်လာခြင်းသည်သေချာပေသည်။မည်သူမဆိုမိမိဘာသာ၊သာသနာ၌ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ နောက်လိုက်ပါက၊လမ်းမှန်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းသည်ကား-တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုယ်တိုင်အို!အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟက်(အမှန်တရား)အား ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ရှိရာဘက်သို့လှည့်ပေးတော်မူပါဟု” ဒိုအာတောင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။